Ithegi: thengisa | Martech Zone
Ukuthengisa umxholo: Libala into oyivileyo ukuza kuthi ga ngoku kwaye uqalise ukuKhokela ngokulandela esi sikhokelo
Lwesine, ngoFebruwari 15, 2018 Lwesine, ngoFebruwari 11, 2021 UStefan Des
Ngaba ukufumanisa kunzima ukuvelisa izikhokelo? Ukuba impendulo yakho nguewe, awuwedwa. UHubspot uxele ukuba i-63% yabathengisi ithi ivelisa ukugcwala kunye nezikhokelo ngumceli mngeni wabo ophezulu. Kodwa mhlawumbi uyazibuza: Ndizivelisa njani izikhokelo zeshishini lam? Ewe, namhlanje ndiza kukubonisa indlela yokusebenzisa ukuthengisa umxholo ukwenza izikhokelo zeshishini lakho. Ukuthengisa umxholo sisicwangciso esisebenzayo onokuwusebenzisa ukwenza izikhokelo
Iingcebiso ezingama-20 zokuqhuba ukuguqulwa kwe-E-Commerce ngeli xesha leholide
NgoLwesithathu, Novemba 16, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Iwotshi iyakhathaza, kodwa ayikashiywa lixesha kubanikezeli be-e-commerce ukuba bazilungiselele iisayithi zabo ukuqhuba ngakumbi uguquko. Le infographic evela kwiingcali zokwenza uguquko kokuhle ibeka iingcebiso ezili-17 zokuzinzisa ekufuneka uziphumezile kwangoko ukuba unethemba lokufumana imali kuthengiso lweholide ngeli xesha lonyaka. Zintathu izicwangciso-qhinga ekufuneka usoloko usisebenzisa ezibonakalisiweyo ukuba zihlala ziqhuba uguquko olongezelelekileyo ngeholide